Ndị ụgbọ elu Southwest na -ekwu na ọrụ ụgbọ elu Jamaica na Upswing
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Ndị ụgbọ elu Southwest na -ekwu na ọrụ ụgbọ elu Jamaica na Upswing
Airlines • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Iwughachi • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem
Ndị isi Southwest Airlines na Wenezdee, Septemba 22, 2021, n'isi ụlọ ọrụ ha dị na Dallas, Texas, gwara Minista njem nlegharị anya Jamaica, Hon. Edmund Bartlett, na ọrụ ụgbọ elu ha na Montego Bay n'izu na ọnwa ndị na-abịanụ dị nso na ọkwa ndekọ ọrịa tupu afọ 2019, na-egosi ịrị elu ịrị elu maka Jamaica site na ndị njem US.
Ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya na Jamaica na -eso ndị isi ụlọ ọrụ njem njem gafee ahịa isi mmalite United States na Canada.
Ebumnuche ya bụ ịbawanye ndị bịarutere ebe a na -akwalite yana ịkwalite itinye ego na mpaghara njem.
Mmekọrịta siri ike dị n'etiti Jamaica na Southwest Airlines na -etolite ngalaba njem nlegharị anya nke mba n'oge ndị a siri ike.
Southwest bụ otu n'ime ụgbọ elu kacha ibu na United States na ọ bụ ụgbọ elu ụgbọelu kacha ọnụ ala n'ụwa. Ọ na-arụ ụgbọ elu na-akwụsịghị akwụsị n'etiti nnukwu ọdụ ụgbọ elu mba ofesi nke Houston (Hobby), Fort Lauderdale, Baltimore, Washington, Orlando, Chicago (Midway), St. Louis, na Montego Bay.
Onye ozi ahụ sonyere na nzukọ ahụ site n'aka onye isi njem nlegharị anya, Donovan White; Onye Ọkachamara Ọkachamara na Ngalaba Njem Nleta, Delano Seiveright; na osote onye isi njem nlegharị anya na mba Amerịka, Donnie Dawson. Ha na -enwe ọtụtụ nzukọ ndị isi ụlọ ọrụ njem njem n'ofe ahịa isi iyi Jamaica, United States na Canada, iji mee ka ndị bịarutere ebe ha na -abịa n'izu na ọnwa ndị na -abịanụ yana kwalitekwa itinyekwu ego na mpaghara njem.
Jamaica Minista njem nleta, Hon. Edmund Bartlett
Bartlett kọwara Imepegharị nke ọma na Jamaica afọ gara aga n'etiti oria ojoo COVID-19, nguzobe nke Resilient Corridors, nke ụwa niile matara dị ka COVID dị mma maka ndị ọbịa na ndị Jamaica, yana mkpa mmekọrịta siri ike dị n'etiti Jamaica na Southwest Airlines na-etolite ngalaba njem nlegharị anya nke mba ndị a. oge ihe isi ike.
Southwest's, Senior Director for Strategic Planning & Airline Partnerships, Steven Swan kwuru nke a Jamaica anọwo “na -echebara echiche,” “doro anya,” “dị mfe nkwurịta okwu,” ma na -anya isi “ezigbo ibu ibu.” Ndị isi ụgbọ elu ahụ kwukwara na ọ bụ ezie na Delta dị iche iche nke COVID-19 butere '' mikpuo '' n'ọchịchọ njem ụlọ na nke mba ụwa, ha na-aga n'ihu na-eme nke ọma ma nwee ntụkwasị obi maka uto n'ọdịnihu.